Download: အကောင့်အခြေပြုအတွေ့အကြုံများအတွက်ရှင်းလင်းပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန် Martech Zone
Demandbase သည် B2B ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ဈေးကွက်သို့သွားရာလမ်းကိုပြောင်းလဲနေသည်။ Demandbase One သည်ထိပ်တန်းအကောင့်အခြေပြုအတွေ့အကြုံ၊ ကြော်ငြာ၊ အရောင်းထောက်လှမ်းရေးနှင့် B2B အချက်အလက်ဖြေရှင်းမှုများကိုဆက်သွယ်ပေးသော B2B သွားလာရင်းသို့စျေးကွက်ဖြေရှင်းချက်များ၏အပြည့်စုံဆုံးအစုံဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အကြီးမားဆုံးနှင့်အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်နေသောကုမ္ပဏီများမှ Marketing နှင့်အရောင်းအဖွဲ့များသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်သည်။ ထောက်လှမ်းရေးကိုမျှဝေနှင့်ပေါက်ကွဲမှုကြီးထွားမှုကိုတွေ့ကြုံခံစား။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအရာရှိချုပ်, Jon Miller က, အကောင့် -based စျေးကွက်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အပေါ်ဤလှပသော ebook သစ်ကိုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သည် (ABM) ... အကောင့် -based အတွေ့အကြုံ (ABX).
ဘာဖြစ်သလဲ အကောင့် -based အတွေ့အကြုံ (ABX)?
၎င်းသည်အကောင့်အခြေပြုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကို အခြေခံ၍ ဖောက်သည်ဗဟိုပြုပြန်လည်စဉ်းစားခြင်းဖြစ်သည်။ အတွင်းဘက်စျေးကွက်၏ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်မှုကိုအကဲဖြတ်သည့်စျေးကွက်၏တိကျမှုနှင့်ပစ်မှတ်ထားမှုတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ABX သည် B2B ဘဝသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် ၀ ယ်သူအတွေ့အကြုံ၏ကဏ္ aspect တိုင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးရိုးရှင်းသော ABM နှင့်ရိုးရာဝယ်လိုအားကိုသာလွန်သည်။ ABX သည်အကောင့်အခြေပြုစျေးကွက်၏သင့်တော်သောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်သည်။
ခေတ်မီ B2B စျေးကွက်ရှာဖွေရေးသည် ၀ ယ်သူအတွေ့အကြုံ၏ကဏ္, တိုင်းကို B2B ဘ ၀ သက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမြှင့်တင်ရန်နှင့်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသော ABM နှင့်ရိုးရာဝယ်လိုအားကိုမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ B2B မှစျေးကွက်သို့သွားမည့်စျေးကွက်မဟာဗျူဟာများပြောင်းလဲလာမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့အတူတူပါပဲလုပ်နေဆက်လက်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုမျှော်လင့်ထားလို့မရပါဘူး။
ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ AI နှင့်ဒေတာကြီးများမှမောင်းနှင်သောမော်ဒယ်အသစ်၊ လုပ်ငန်းစဉ်အသစ်များနှင့်နည်းပညာအသစ် - B2B ကုမ္ပဏီတိုင်းအတွက်အကောင့်အခြေပြုအတွေ့အကြုံအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလမ်းကိုပြသရန်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဤတွင် B2B မှစျေးကွက်သို့သွားသောနည်းဗျူဟာအတွက်သုံးစွဲသူဗဟိုပြုနှင့်အကောင့်အခြေပြုမှန်ဘီလူးကိုအသုံးပြုရန်သင်၏တရားဝင်ပြည့်စုံသောလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။ လမ်းညွှန်တွင်ပါဝင်သည် -
အဘယ်ကြောင့်အကောင့် -based အတွေ့အကြုံ?
5 ABX လုပ်ငန်းစဉ်များ
ပါ ၀ င်ခြင်း (နားလည်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်း၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်သံစုံတီးဝိုင်း)
ebook တွင်သင်၏ကြယ်အားလုံးကြယ် ABM အဖွဲ့ကိုတည်ဆောက်ပုံ၊ ဘတ်ဂျက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပုံနှင့်သင်စတင်ရန်သင်ထောက်ကူစာရွက်စာတမ်းများပါ ၀ င်သည်။
အကောင့် -based အတွေ့အကြုံမှရှင်းရှင်းလင်းလင်း & ပြီးပြည့်စုံသောလမ်းညွှန် (ABX) ကို download လုပ်ပါ။
Tags: abmabm ကြော်ငြာဘတ်ဂျက်များabm ebookabm ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုabm အကောင်အထည်ဖော်မှုabm သံစုံတီးဝိုင်းabm မဟာဗျူဟာများabxအကောင့်ခရီးများအကောင့် -based အတွေ့အကြုံအကောင့် -based စျေးကွက်ရှာဖွေရေးaiကြီးမားတဲ့ data တွေကိုမင်္ဂလာပါdownload,ebookထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအခမဲ့ download
နံရံကပ်ပရင်တာ - အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်နံရံများတွင်ဒေါင်လိုက်ပုံနှိပ်ခြင်းအဖြေ